Print Page - Waa maxay sababaha keena Maskax Wareerku?
Diseases and Conditions => Cudurrada Maskaxda => Topic started by: SomaliDoc on March 12, 2008, 07:02:23 AM
Title: Waa maxay sababaha keena Maskax Wareerku?
Post by: SomaliDoc on March 12, 2008, 07:02:23 AM
1- Waa maxay xanuun maskaxeed? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=785.0)
2- Sidee loo baaraa xanuunada maskaxda? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=789.0)
3- Noocyadee bay xanuunnada maskaxdu yeelan karaan? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=791.0)
5- Sidee buu nidaamka caafimaadka maskaxdu u caawin karaa? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=817.0)
6- Maxay asxabtu iyo qaraabadu samayn karaan si ay kuu caawiyaan? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=824.0)
7- Sidee baan u hagaajin karaa caafimaadkayga xagga maskaxda? (http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=826.0)
Title: Re: Waa maxay sababaha keena Maskax Wareerku?
Post by: Toldo on March 12, 2008, 02:34:44 PM
Post by: Samira on March 13, 2008, 01:30:19 AM
aad ayaa ugu mahadsan tahay, lakin waxaan jeclaa inaad examples bixisid :) at least magacyada jirooyinka uu soomaali ah aan baran lahayn !!
Post by: SomaliDoc on March 13, 2008, 02:46:56 AM